ချင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် အစိုးရ ရန်ကုန်တွင် ဆွေးနွေးမည် | ဧရာဝတီ
ချင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် အစိုးရ ရန်ကုန်တွင် ဆွေးနွေးမည်
နန်းဆိုင်နွမ်| December 6, 2012 | Hits:1
| | ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် တွေ့ရသော CNF အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ပူကျင်ကျုံး(ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင်/ ဧရာဝတီ)
ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF) ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်း ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Peace Center တွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်မည့် အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသည် ရန်ကုန်မြို့၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သည့် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး အတွက် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း CNF တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ၂ ဒေါက်တာ ရွှေခါး က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီကိုလာရောက်ဖို့က အစိုးရဘက်က လှမ်းဖိတ်လို့ပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ တဘက်နဲ့ တဘက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး ရင်းနှီးမှုနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲတွင် အမျိုးသားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စ၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ CNF မှ ၂၁ ဦး တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဘက်မှ ၁၂ ဦး တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ CNF သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူ ထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ ကျောင်းသား လူငယ်များ၊ ချင်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် လည်း တွေ့ဆုံသွားမည်ဟု သိရသည်။
“၂၄ နှစ် ကြာမှ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာပြီး မိသားစုနဲ့ ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာရပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု စစ်စစ် မူ ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အတွက် ဆက်လက် လုပ်ရဦးမှာပါ။ ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း ကျနော်တို့ မိသားစုနဲ့ ကွဲနေ ရဦးမယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာလည်း မိဘပြည်သူတွေ အားလုံးလက်တွဲလုပ်မှ ရရှိမှာပါ”ဟု CNF အလုပ်အမှုဆောင် သောမတ်စ် က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
CNF သည် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်တွင် ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့ ၌ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ပဏာမသဘောတူညီချက် ၉ ချက်ကို လည်းကောင်း၊ မေလ ၇ ရက်က ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ဟားခါးမြို့၌ တွေ့ဆုံကာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက် ၁၅ ချက်ကို လည်းကောင်း သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။
“အရင် ဆွေးနွေးပွဲတွေတုန်းက နယ်စပ်မှာ ကျင်းပခဲ့တယ်။ အခုလို ပြည်တွင်း ရန်ကုန်မှာ လာလုပ်ရတဲ့ အတွက် အရမ်း ၀မ်းသာ တယ်။ နှစ် ၂၀ကျော် မတွေ့ရတဲ့ သူတွေကို အခုလိုတွေ့ပြီး ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စုံစုံလင်လင် ပြန်တွေ့ရတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ချင်းပြည်နယ် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းမှ David That Bik ကလည်း ဧရာဝတီသို့ပြော သည်။
ယမန်နေ့က အိန္ဒိယနယ်စပ်မှ ရောက်လာသော အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ပူကျင်ကျုံး (Pu Zing Cung)ဦးဆောင်သည့် CNF ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များကို ရန်ကုန်မြို့ မှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ ချင်း နိုင်ငံရေးပါတီများက ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြ သည်။
CNF သည် ယခင် စစ်အစိုးရနှင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် တကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော CNF အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်အား အနည်းဆုံးသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များတွင် ပါဝင်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လက်နက်ကိုင်အင်အား မည်မျှရှိသည်ကို မသိရသေးပေ။
Shwe Yoe December 6, 2012 - 10:17 pm In 1947, Pang Long Treaty was signed under the leadership of General Aung San to buildagenuine Union of Burma, but we the ethnics were cheated and betrayed. I do not see clear reason why the Burmans are seriously considering for change today. Actually, federal Union is notabad system for the Burmans either. What we all need is freedom. It is good for the Burmans and also for the ethnics. Freedom is good for all human beings.
Reply ALBERT LIAN December 7, 2012 - 12:26 pm it’s federal democracy… not democracy.. plz do care what they’ve said….